वाशिंगटन WIC | JPMA, Inc.
एक विक अफिस वा फोन खोज्नुहोस् #
त्यहाँ वाशिंगटन राज्य भरमा 200 WIC कार्यालयहरू छन्। तपाईंको नजिकको WIC कार्यालय फेला पार्न:
प्रयोग गर्नुहोस् "WIC कार्यालय खोज्नुहोस्"WICShopper अनुप्रयोगमा बटन
परिवार स्वास्थ्य हटलाइनलाई कल गर्नुहोस् 1-800-322-2588
"WIC" लाई पाठ गर्नुहोस् 96859
PenderHelp123 को भ्रमण गर्नुहोस्
कसरी एक विक स्टोर खोज्न को लागी
"WIC स्वीकृत यहाँ" चिन्ह हेर्नुहोस्।
कृपया ध्यान दिनुहोस्: यदि तपाइँ WICShopper अनुप्रयोगको बारेमा प्रश्न पेश गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया ईमेल गर्नुहोस् [ईमेल सुरक्षित]
WIC कार्डहरू र फाइदाहरू
Q: म अनुप्रयोगमा मेरा वर्तमान WIC खाद्य लाभहरू किन देख्न सक्दिन?
A: यो केहि कारणहरूले हुन सक्छ:
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वर्तमान WIC कार्ड अनुप्रयोगमा दर्ता छ
लाभहरूले तपाईंलाई अनुप्रयोगमा उनीहरूले देख्नु अघि EBT प्रदायकमा पुग्न आवश्यक छ। केही थप मिनेट अनुप्रयोगलाई अनुमति दिनुहोस्। त्यसपछि आर ट्याप गर्नुहोस्efresh बटन in मेरो फाइदाहरू अनुप्रयोगमा तपाईंको नयाँ लाभ रकम अपडेट गर्न।
वर्तमान लाभहरू हेर्नको लागि:
'मेरो फाइदाहरू' ट्याप गर्नुहोस्
ट्याप गर्नुहोस् रिफ्रेस बटन भित्र मेरो फाइदाहरू तपाइँको जानकारी ताजा गर्न
यदि तपाईंले सूचिबद्ध कुनै पनि खाद्यवस्तु देख्नुहुन्न, र तपाईंलाई फाइदा छ भनेर थाहा छ भने, यसको अर्थ लाभहरू केही दिनमै सुरू हुन सक्दछ। यस अवस्थामा तपाईका सुविधाहरू "भविष्यका बेनिफिटहरू" मुनि देखा पर्नेछ।
ट्याप गर्नुहोस् भविष्यका फाइदाहरू हेर्नुहोस् मेरो लाभहरू स्क्रिन भित्र।
जब हालका लाभहरूले शून्य सन्तुलन देखाउँछन्, यसको मतलब तिनीहरू प्रयोग भइसकेका छन्।
Q: पालनपोषण परिवारहरूले अनुप्रयोगमा एक भन्दा बढी बच्चाको WIC कार्ड दर्ता गर्न सक्दछन्?
A: हो, पास्टर परिवारहरूले उही अनुप्रयोगमा एक भन्दा बढी WIC कार्ड दर्ता गर्न सक्छन्।
प्रत्येक बच्चाको WIC सुविधाहरू हेर्न
स्क्याक बारकोड वा कुञ्जी UPC प्रविष्ट गर्नुहोस्:
Q: मैले केहि खाद्यान्न स्क्यान गरें वा कुञ्जीले एउटा UPC नम्बर प्रविष्ट गर्‍यो र केहि फरक सन्देशहरू देखें। त्यसको मतलब के हो?
अनुमति - WIC ले यस वस्तुलाई अनुमति दिन्छ। यद्यपि तपाईं अनुप्रयोगमा तपाईंको WIC कार्ड दर्ता गर्नुहुनेछ, यो “अनुमति दिईएको” सन्देश तपाईंको परिवारका सुविधाहरूमा लागू हुँदैन। उदाहरणका लागि, एक बर्षेको बच्चाले WIC मा पूरै दूध पाउँदछ। यदि तपाईंसँग तपाईंको परिवारमा एक बर्षको बच्चा छैन भने, पूरा दूध तपाईंको WIC खाना बेनिफिटहरूको अंश हुनेछैन, र तपाईं चेक स्ट्यान्डमा पूरा दूध किन्न सक्षम हुनुहुने छैन।
WIC वस्तु होइन - यो आईटम WIC अनुमोदित खाद्य पदार्थ सूचीमा छैन वा यो खाद्य वस्तुलाई अनुमति छैन। यसको मतलब यो पनि हुन सक्छ कि यो नयाँ चीज हो जुन हामीले पहिले देखेका थिएनौं।
नोट: यो सन्देश ताजा उत्पादनमा लागू हुँदैन। तल ताजा फलफूल र तरकारी प्रश्नहरू हेर्नुहोस्।
कुनै योग्य बेनिफिटहरू - यो आईटम WIC अनुमोदित छ, तर तपाइँ कि त यो आइटम तोकिएको थिएन वा तपाइँसँग उत्पादन खरीद गर्न पर्याप्त सुविधाहरू बाँकी छैन।
पहिचान गर्न असमर्थ - यसको मतलब अनुप्रयोग बारकोड पढ्न सक्दैन। स्क्यान गर्नुको सट्टा, तपाईं खानाको बारकोड मुनि रहेको १२-अंकको UPC नम्बर प्रविष्ट गर्न "कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस् UPC" बटन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Q: किन मेरा केही ताजा फलफूल र तरकारीहरू "एक WIC वस्तु होईन" को रूपमा स्क्यान गर्छन्?
A: WIC ले प्राय ताजा फलफूल र तरकारीहरू अनुमति दिन्छ। प्रत्येक ताजा फलफूल र तरकारीहरूको आफ्नै स्थानीय कोड हुन्छ। यी कोडहरू सबै स्टोरहरूमा समान छैन। यस कारणका लागि, अनुप्रयोगले सबै फलहरू र तरकारीहरू चिन्न सक्दैन। कुनै पनि अनुप्रयोगले आईटमलाई चिन्न सक्दैन, यसले स्क्यान गर्दछ "एक WIC आईटम हैन "। प्रयोग गर्नुहोस् WIC स्वीकार्य फूडहरू अनुमति दिइएको उत्पादन वस्तुहरूको बारेमा प्रश्नहरूको लागि अनुप्रयोगमा बटन।
Q: किन मेरो WIC कार्डले मेरो नयाँ ब्लूबेरी वा अन्य ताजा फलफूल र तरकारीहरूको लागि भुक्तान गरेन?
A: WIC ले प्राय ताजा फलफूल र तरकारीहरू अनुमति दिन्छ। अधिक जानकारीको लागि WIC शपिंग गाईड वा WIC लाई अनुमति दिन मिल्ने फूड बटन जाँच गर्नुहोस्। यदि WIC सुविधाहरूले ताजा उत्पादनको लागि भुक्तान गर्दैन भने, हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। हामीले तपाईंबाट निम्न जानकारी प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ:
वस्तु उत्पादन गर्नुहोस्: अधिक जानकारी, राम्रो। उदाहरण को लागी, स्याउ वा ब्लूबेरी भन्न को सट्टा, हामी गाला स्याउ वा जैविक Driscoll ब्लूबेरी जान्नु पर्छ।
मिति: मिति तपाईं किनमेल गर्न गए।
स्टोर नाम र स्थान.
प्रत्येक स्टोरले यो निश्चित गर्नु पर्छ कि ताजा उत्पादन वस्तुहरू स्टोर WIC कोडमा लिंक हुनेछ। यदि स्टोरले कुनै चीजलाई लिंक गर्न सकेन भने, चेक आउट आउटमा WIC फूडको रूपमा स्क्यान हुँदैन। अनुप्रयोगमा ", म यो किन्न सक्दिन!" बटन प्रयोग गरेर हामीलाई थाहा दिनुहोस्। तपाईं पनि हामीलाई ईमेल गर्न सक्नुहुन्छ [ईमेल सुरक्षित].
मैले यो खरीद गर्न सकेन!
A: यो बटन प्रयोग गर्नुहोस् जब तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि खानालाई WIC लाई अनुमति दिईएको छ, तर जब तपाइँ चेकआउट स्ट्यान्डमा पुग्नुहुन्छ, यसलाई अस्वीकार गरिन्छ। यो बटनले हामीलाई सन्देश पठाउँदछ, त्यसैले हामी यो किन भएको हुन सक्छ हेर्न सक्दछौं।
यहाँ हामी के गर्छौं:
हामी हामीलाई पठाइएका सबै आईटमहरू समीक्षा गर्दछौं।
यदि आईटमहरू अनुमोदित भए, हामी तिनीहरूलाई WIC अनुमोदित सूचीमा थप्छौं।
केहि केसहरूमा, अनुमति दिईएको WIC आईटमहरू स्टोरमा अस्वीकृत हुन्छन् र हामी यसको कारण पत्ता लगाउन काम गर्दछौं।
तपाइँ कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ:
हाम्रो समीक्षाको लागि हामीलाई तपाईलाई उपलब्ध गराउन सक्ने जति विस्तार चाहिन्छ। यसले निम्न समावेश गर्दछ:
स्टोर नाम र स्थान
वस्तु विवरणहरू - उदाहरण को लागी, डेरिगोल्ड ल्याक्टोज निःशुल्क १% दूध
खाना प्याकेज आकार - औन्सको संख्या वा यदि क्वाटर, ग्यालन, इत्यादिमा आउँछ।
बारकोडको साथमा १२ अंकको UPC कोड अवस्थित छ
यदि सम्भव छ भने, आईटमहरूको लागि रसिदको ईमेल चित्रहरू अस्वीकृत गरियो [ईमेल सुरक्षित]
Q: म कहाँ WIC खाना प्रश्नहरू सोध्न सक्छु?
A: तपाईं आफ्नो WIC क्लिनिक सोध्न वा मा राज्य WIC खाद्य पदार्थ टीम मा प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ [ईमेल सुरक्षित].